फिलिपिन्समा कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको वार्ता तोडियो, नेपालमा के हुन्छ ? – BikashNews
फिलिपिन्समा कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको वार्ता तोडियो, नेपालमा के हुन्छ ?
२०७५ चैत ८ गते ९:३७ विकासन्युज
मनिला । फिलिपिन्स सरकारले कम्युनिष्ट बिद्रोहीसँगको वार्ता भंग गरेको छ । फिलिपन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले विद्रोही कम्युनिष्ट गुरिल्लाहरुसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोली भंग गरेका हुन् । राष्ट्रपति डुटेर्तेको कार्यालयले जनाएअनुसार सो वार्ता टोली गत मङ्गलबार भङ्ग गरिएको हो ।
नेपालमा पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हिंसात्मक गतिबिधी गरेको भन्दै सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको बताएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अर्ध भूमिगत गतिबिधी गर्दै आएको छ ।
फिलिपिन्सका श्रमसम्बन्धी सचिवको नेतृत्वमा रहेको सो वार्ता टोलीलाई भङ्ग गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको समाचारमा जनाइएको छ । सो वार्ता समिति चार सदस्यीय रहेको थियो । राष्ट्रपति डुटेर्तेले कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुसँगको वार्ता पनि यसअघि नै भङ्ग गरिसकेका थिए । त्यसैले सो समिति भङ्ग भएको जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उनले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा विद्रोहीसँगको वार्ता एकतर्फी रुपमा सरकारले भंग गरेको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपति डुटेर्तेले सन् २०१७ को नोेभेम्बरमा सरकारको तर्फबाट त्यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको शान्तिवार्ता स्थगित गरेको जानकारी दिए । विद्रोहीहरुले शान्ति वार्ताका लागि इमान्दारिता नदेखाएका र उनीहरुका व्यवहारबाट सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेकोले आफ्ना तर्फबाट यो वार्ता नगर्ने भनी सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि सरकारी तर्फको शान्ति वार्ता टोली रहेकोमा यसलाई अहिले आएर भंङ्ग गरिएको हो । सरकारले शान्ति वार्ताका लागि जोड दिएको भए पनि कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले भने हिंसात्मक आक्रमणहरु गर्ने गरेकोले सरकारी उनीहरुसँग बसेर शान्ति वार्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले सो वार्ता सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि नै रोकेको थियो ।
यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले सन् १९६९ देखि फिलिपिन्सको सरकार फाल्न भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुको हिंसा सन् १९८० को दशकमा आएर निकै बढेको थियो । त्यस समयमा नै यहाँका हजारौँ नागरिकले हिंसामा परी ज्यान गुमाएका थिए । सरकारले यो विद्रोहलाई दबाउनका लागि समय समयमा सैनिक शासन पनि लगाउँदै आएको छ ।
तर अहिले सो सङ्ख्यामा कमी आएको सेनाले जनाएको छ । सेनाको तथ्यांकअनुसार हाल यहाँका गुरिल्लाहरु चार हजारको संख्यामा मात्र सीमित रहेका छन् ।